Nitombo Maro Dia Maro Ny Fangataham-Panesoram-Botoaty Nataon’ny Governemanta Rosiana, Hoy Ny Tatitry Ny Twitter · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 07 Marsa 2016 4:36 GMT
Mampiseho ny tatitra mangaraharan'ny twitter farany indrindra fa nitombo 25 avo heny ny isan'ny fangatahan'i Kremlin hanaisotra votoaty tamin'ny tapany faharoan'ny taona 2015 raha oharina amin'ny tatitra tamin'ny vanim-potoana teo aloha.
Araka ny filazan'ny Twitter, nandefa fangatahana 1735 ny governemanta Rosiana sy ny sampana ofisialy hafa, toy ny sampan-draharaha misahana ny fampiharana ny lalàna teo anelanelan'ny volana Jolay ka hatramin'ny Desambra 2015 hanesorana votoaty amin'ny Twitter, in-25 avo heny noho ny tamin'ny tapany voalohan'ny taona 2015 (fangatahana 68), ary in-19 avo heny tamin'ny fotoana mitovy tamin'ny taona 2014 (fangatahana 91).
Tamin'ireo fangatahana an-jatony, enina ihany no niaraka tamin'ny didim-pitsarana. Fangatahana fanesorana 1.729 no tonga mivantana avy amin'ny sampan-draharahan'ny governemanta Rosiana toy ny Roskomnadzor sy ny polisy, tsy nandalo fitsarana. Kaonty Twitter 1.774 no voakitikitika nangataham-panesoram-botoaty. Azo jerena ao amin'ny lahatahiry Lumen ny sasany amin'ireo kopian'ny fangatahana fanesorana votoaty.
Rosia no nitana ny laharana faharoa tamin'ny isan'ny fangatahana fanesoram-botoaty tao anatin'ny enimbolana, ka i Torkia no mitarika amin'ny fangatahana 1.761. Mitatitra ny Twitter fa nohazoniny ny votoaty sasany noho ny fangatahan'ny governemanta Rosiana tamin'ny 5%-n'ny tranga. Ny mihazona votoaty dia midika fa tsy hita amin'ny firenena iray manokana, amin'ny fampiasana ny fitaovam-pihazonana votoaty Twitter ny votoaty amin'ny kaonty na sioka sasantsasany.
Nahazo fangatahana fanesorana miisa 1.729 avy amin'ny Sampan-dRaharaha Mpanaramaso Federaly eo amin'ny sehatry ny fifandraisana, teknolojian'ny fifandraisana ary ny fampitam-baovaom-bahoaka (Roskomnadzor) iahay eo amin'ny votoaty voafaritra ho manitsakitsaka ny lalàna rosiana, toy ny Lalàna Federaly 149-FZ. kaonty 14 no nohazoninay sy sioka maningatsingana miisa 82 (mahakitika kaonty 74), ka tafiditra ao ny ny votoaty voalaa ho mampiroborobo ny famonian-tena sy ny votoaty navoakan'ny vondrona mampiadihevitra fantatra amin'ny anarana hoe Faribohitra Avaratra.
Nomarihan'ny tatitry ny Twitter fa tamin'ny tranga sasantsasany dia noesorina ny votoaty satria nanitsakitsaka ny fifanarahana amin'ny fampiasana ny Twitter mihitsy: tamin'ny 75%-n'ny tranga izay nohazonina noho ny fitorian'ny manampahefana rosiana, dia noesorina fa “nanitsakitsaka ny politikam-pitondra-tena mihoa-pampana fa manambaka ara-pananahana ny ankizy.”
Nanome ohatra amin'ireo toe-draharaha nanapahany hevitra tsy hihazona votoaty sasantsasany koa ny Twitter na dia teo aa ny fangatahan'ny manampahefana rosiana.
Tsy nanao na inona na inona izahay tamin'ireo sioka mifandrohy amin'ny YouTube mitsikera ny governemanta rosiana, ka tafiditra amin'izany ny sioka avy amin'ny olona manandaza iray amin'ny antoko rosiana ao amin'ny fanoherana. Tsy nanao na inona na inona koa izahay tamin'ny tatitra mifandraika tamin'ny kaonty Twitter an'i Charlie Hebdo tamin'ny sioka nanohana ny tarika Pussy Riot, na tamin'ny sioka manonona boky iray mitsikera an'i Lenin na Stalin.
Ankoatra izany, notaterin'ny Twitter fa nandritra ny tapany faharoa tamin'ny taona 2015, dia nahazo fangataham-baovao avy ao Kremlin momba ireo kaonty Twitter an'olona manokana miisa 87 ry zareo saingy nandà ts hamoaka momba ireo tranga rehetra ireo. Io isa (fangataham-baovao 82) io dia niakatra raha oharina tamin'ny fangatahana natao tamin'ny tapany voalohany tamin'ny taona 2015 (fangataham-baovao 43), saingy latsaka tamin'ny fangatahana miisa 108 te-hahalala momba izay mpiserasera ao ambadika nandritra ny tapataona faharoan'ny taona 2014.